Ahoana ny fomba hamafana ny kaonty mailaka rehetra | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fomba hamafana ny kaonty mailakao rehetra
Vao tsy ela izay dia nanana kaonty momba elektronika namany Sary natokana ho an'ny olom-bitsy manana tombontsoa mampiasa Internet izany. Niova be ny zavatra ankehitriny, ary ny ankamaroantsika dia efa mahazo fidirana amin'ny tambajotram-pifandraisana, tsy avy amin'ny zavatra ananantsika ihany, fa avy amin'ny toerana rehetra, noho ireo fitaovantsika finday. Ankoatr'izay, amin'ny filaminana tanteraka, raha tadiavintsika izany dia ho sarotra amintsika ny mahita olona tsy manana adiresy mailaka.
Na izany aza, ny olana miseho ankehitriny dia ny fananana kaonty mailaka marobe, izay indraindray tsy ampiasaintsika ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mila manafoana isika. Ho an'izany rehetra izany, anio dia hanazava amin'ny fomba tsotra isika ny fomba hamafana ny kaonty mailaka rehetra, na inona na inona avy amin'ny Gmail, Yahoo na Hotmail ary amin'ny fomba haingana indrindra.
1 Ahoana ny fomba hamafana kaonty mailaka amin'ny Gmail
2 Ahoana ny fomba hamafana kaonty mailaka Hotmail
3 Ahoana ny fomba hamafana kaonty mailaka Yahoo
4 Ahoana ny fomba hamafana kaonty mailaka AOL
Ahoana ny fomba hamafana kaonty mailaka amin'ny Gmail
ankehitriny Gmail no serivisy mailaka be mpampiasa indrindra manerantany ary toerana ahafahanao adiresy mailaka mihoatra ny iray aza. Google, tompon'ny serivisy, dia manamora ny hanafoananay kaonty, toy ny amin'ny ankamaroan'ny tranga rehetra, ka tsy maintsy arahinao ireto dingana manaraka asehonay anao etsy ambany ireto;
Midira amin'ny pejy Tiana ny kaonty
Tsindrio izao ny safidy Esory ny vokatra. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia tsy maintsy miditra ao amin'ny kaontinao ianao ho fepetra fiarovana
Eo akaikin'ny Gmail dia tsy maintsy tsindrio ny safidy Delete
Ankehitriny ianao dia tsy maintsy manaraka ny torolàlana aseho eo amin'ny efijery mba hanesorana tanteraka ny kaonty mailakao amin'ny serivisy Google
Ahoana ny fomba hamafana kaonty mailaka Hotmail
Nisy fotoana ny mailaka Hotmail no be mpampiasa indrindra, indrindra satria nanome fidirana amin'ny rindranasan Messenger izy ireo, izay WhatsApp voalohany. Na izany aza, tsy dia kely noho izany ny fampiasana azy ary manome antsika ny fahafaha-manafoana ireo kaonty mailaka an'ny Outlook.com (Hotmail teo aloha) ny Microsoft.
Nisy fotoana ny mailaka Hotmail no be mpampiasa indrindra, indrindra satria nanome fidirana amin'ny rindranasan Messenger izy ireo, izay WhatsApp voalohany. Saingy, amin'izao fotoana izao dia mihoatra lavitra noho ny kely ny fampiasana azy ary manome antsika ny fahafaha-manafoana ireo kaonty mailaka an'ny Outlook.com (Hotmail teo aloha) i Microsoft.
Mba hamafana maharitra ny kaonty mailaka Hotmail anao dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao, izay indray mandeha ihany, ary tsy mitovy amin'ny eritreretintsika rehetra, no tsotra indrindra;
Midira amin'ny Serivisy kaonty Microsoft (fantatra tamin'ny anarana hoe Microsoft Passport Network) ary midira amin'ny kaonty tianao hamafa
Ankehitriny dia tokony hanaraka ny torolàlana aseho eo amin'ny efijery ianao ary afaka mahita amin'ny sary etsy ambony. Zava-dehibe ny famakianao tsara azy ireo satria raha tsy izany dia azonao atao ny mamafa tsy diso ny kaonty mailaka sy ny mailaka fotsiny, fa koa, ohatra, ireo rakitra voatahiry ao amin'ny Drive
Vantany vao tonga hatramin'ny farany isika Hiandry 60 andro i Microsoft mba hamafana maharitra ny kaontinao. Raha manova ny sainao ianao dia tsy hiditra afa-tsy eo amin'io fe-potoana io ihany ary ho foana ny fanidiana ny kaonty. Raha tsy miditra indray ianao ao anatin'ny 60 andro, hamafa mandrakizay ny kaontinao i Redmond.
Ahoana ny fomba hamafana kaonty mailaka Yahoo
Vao tsy ela akory izay Yahoo! Iray amin'ireo serivisy mailaka malaza eny an-tsena izy io, ary mpampiasa maro be no nanana kaonty mailaka niaraka tamin'i @ yahoo.es na @ yahoo.com. Amin'izao fotoana izao ny amerikana goavambe dia tsy mandalo ny fe-potoana tsara indrindra ananany ary mihamaro ny mpampiasa mandositra any amin'ny sehatra hafa. Ny iray amin'ireo antony marobe amin'ity diabe ity dia ny tsy fisian'ny filaminana, toy ilay niaina tamin'ny 2014 niaraka tamin'izy ireo ary, na izany aza, tsy nekena tamin'ny mpampiasa izany hatramin'ny 2016.
Raha te-hanidy ny kaonty mailaka Yahoo ianao dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto;
Midira amin'ny pejy famaranana manokana ny kaonty Yahoo na ny pejy fanakatonana kaonty manokana raha toa ka fitaovana finday ny fomba fidiranao
Ampidiro izao ny teny miafinao ary kitiho Kaonty akaiky. Tsy maintsy mameno captcha ianao ary manamafy ny famafana ho dingana farany
Ahoana ny fomba hamafana kaonty mailaka AOL
AOL Izy io dia iray amin'ireo serivisy mailaka malaza indrindra, saingy taty aoriana dia very ny ampahany lehibe amin'ny lazany. Ho fanampin'izany, tafiditra ao koa ny fanolorana antsika fahafaha-mitantana famandrihana ny serivisy AOL. Amin'ny famafana ny kaontintsika dia very ny safidy hitantanana ny mailaka misy antsika, fa ny fahafahan'ny fitantanana famandrihana ihany koa.
Raha hamafa kaonty AOL dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao asehonay anao eto ambany;
Midira amin'ny tranokala AOL ary avy eo ny kaontinao amin'ny alàlan'ny fanomezana ny solonanarana sy ny teny miafina ampiasainao matetika
Ankehitriny dia tsy maintsy ampidirinao ny valin'ny fanontaniana napetraka tamin'ny fiarovana ary tsindrio ny bokotra "Tohizo".
Safidio ny safidy "Tantano ny hadiko AOL" ao amin'ny faritra "Safidin'ny serivisy"
Tsindrio izao ny bokotra "Manafoana", izay hampiakatra ny menio latsaka izay tsy maintsy misafidy ny antony hanafoanana ny kaontintsika.
Farany, tsindrio ny bokotra "Cancel AOL" ary ho vita ny fizotrany ary efa voafafa ny kaontinao
Isaky ny manana sy mitantana kaonty mailaka betsaka kokoa izahay, saingy angamba tokony hijanona ianao hieritreritra hoe firy no tena ilainao ary eritrereto ny fanesorana ireo rehetra izay tsy ampiasainao intsony. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia nomenay anao ny lakileny hanafoanana ireo kaonty mailaka malaza indrindra, koa midino miasa ary ahenao ny kaonty mailakao.
Nahavita nanala ireo kaonty mailakao taminao ve ianao tamin'ny fanarahana ny dingana efa natoronay?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tutorials » Ahoana ny fomba hamafana ny kaonty mailakao rehetra
Maria Olmo dia hoy izy:
Hitako fa tena tsara sy tena nilaina ny lahatsoratrao, nanararaotra nanafoana kaonty izay tsy fantatro ny fomba hanaovana izany. Misaotra anao.
Nahita ihany koa aho, mitady ny fomba hamafana kaonty, ity tranonkala hafa hitako fa mahaliana ity raha sanatria ka afaka manampy olona iray izany http://www.eliminartucuenta.com
Valiny tamin'i María Olmo
Salama, tsy hitako ny fomba hanafoanana ny kaontiko aol.
Midira amin'ny solonanarana sy tenimiafiko aho, tsy manao ny
fanontaniana fiarovana mifanaraka amin'izany.
Mandeha amin'ny farany ankavanan'ny pejy aho: ny kaontiko, kitiho ary
Mandeha amin'ny mombamomba ahy manokana aho, tsy misy safidy hafa.
Fitrandrahana Cryptocurrency, tadiavo ny fomba fanaovana harena an-kibon'ny tany amin'ny rahona
Seedi, console hybrid izay mamela ny filalaovana lalao amin'ny CD